musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Mazuva Matsva eITB Berlin: Kurume 9-13 rarama uye mu-munhu
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Wtn
Muna 2020 ITB yakabviswa kwasara mazuva mashoma kuti chiitiko chakatengeswa chitange. eTurboNews akanga afanotaura kukanzurwa, asi akanga ari muBerlin uye akatanga rebuilding.travel nhaurirano, pamwe chete nePATA neAfrican Tourism Board. Muna 2022 hurukuro iyi ichaenderera mberi muBerlin - panguva ino neITB inotarisirwa kuva yakasimba uye mhenyu.
Messe Berlin, murongi weITB akasimbisa kuti hombe yekushambadzira indasitiri yekushambadzira ichadzoka.
ITB yakarongwa kubva munaKurume 9-13, 2022 kuGermany Capital City
Iyo G2 pfungwa ichashanda. Zvinoreva kuti vashanyi vakabayiwa kana kudzoreredzwa chete kana varatidziri ndivo vachabvumidzwa.
Muna 2022 iyo World's hombe Yekufamba Show yadzoka inogara muBerlin, ine-mu-munhu chiitiko uye nemasevhisi ekuita kuti ITB Berlin ive chaiyo yepasirese chiitiko zvakare.
Idzi inhau dzakanaka dzeBerlin Hotels, vatyairi vematekisi, maresitorendi, ndege, uye munhu wese ari pasirese ari kurarama muindasitiri yekufambisa uye yekushanya.
Ibudiriro yakanaka yepasirese yekushanya, uye chivimbo chinodiwa pakudzoreredza chikamu,
The World Tourism Network yakatanga muBerlin munaKurume 2020 padivi peiyo yakadzimwa ITB. "Tiri kutarisira kusangana muBerlin muna 2022 neITB iri kuitika.", akadaro Juergen Steinmetz, sachigaro, uye muvambi wesangano rine nhengo dziri munyika zana nemakumi maviri nesere.
ITB yakaisa inzwi mukuti:
"Nekuda kwemamiriro ezvinhu aripo, vatori vechikamu vakabaiwa zvizere kana kupora chete ndivo vachabvumidzwa kupinda muzviitiko kusvika paziviswa (2G mutemo)."
Nekudaro, zvinoenderana nemamiriro azvino emutemo, varatidziri nevashanyi veITB Berlin 2022 vanofanirwa kunge vachangobva kupora kana kubaiwa zvizere ne EU yakatendera mushonga weCOVID-19 uye ipa humbowo hweizvi nedhijitari EU chitupa.
Maererano ne Claudia Dallmer, PR mubatsiri weITB, vashanyi vasiri veEU vanofanirwa kunge vakanaka nezvitupa zvakatenderwa kana kuti vanogona kushandura mapasi ekudzivirira kuita magwaro eEU.
Mamwe mashoko achauya, maererano naMs. Dallmer.
Parizvino, Messe Berlin inovimbisa pawebhusaiti yayo:
Mwedzi ichangopfuura yakaratidza kukosha kwekusangana kwechiso nechiso pakati pevanhu. Zviitiko zvakaita sezvedu ndizvo zvinorova pamoyo weindasitiri. Sevaratidziri uye vashanyi vekutengesa iwe uri pakati pechiito. Muna 2022 chinhu chimwe chichave chakakosha: misangano yako inofanirwa kuve yakachengeteka uye inobudirira sezvavanogona.
Munguva dzino, zviitiko zvinoda kuchengetedzwa kwakakosha uye hutsanana matanho. Tinokuvimbisa kuti chinangwa chedu chiri pakuchengetedza hutano hwako. Chinangwa chedu chakajeka: kugadzira nharaunda zvakachengeteka uye nehunyanzvi sezvinobvira kuitira kuti indasitiri yekufambisa uye bhizinesi rako ribudirire zvakare. Kuti tiite izvi isu tiri kugara tichisangana neakakodzera ehutano hweveruzhinji zviremera zveNyika yeBerlin.
Unogona kuwana zvimwe pano nezvemibvunzo ine chekuita nekuchengeteka uye utsanana.